Ny kaody iOS 14 dia manondro fa ny iPhone 12 Pro ihany no hanana sensor ToF 3D | Vaovao IPhone
Ny kaody iOS 14 dia manondro fa ny iPhone 12 Pro ihany no hanana sensor 3D ToF
Mitohy ny fahitana ny zavatra ao amin'ny kaody iOS 14 tafaporitsaka ary be ny tsaho manolotra antsika rehefa mahita ireo fiasa vaovao voalamina ao aminy. Izay efa hita izao dia efa fantatra amin'ny ampahany. Ny iPhones manaraka dia hampiditra vaovao fakan-tsary aoriana miaraka amin'ny ToF 3D.
Matrix an'ny laser hahafahana manana data momba ny halaviran'ny zavatra miseho amin'ny sary nalain'ny iPhone. Seho iray efa nampiharina teo amin'ny fakan-tsary voalohany avy amin'ny iPhone X. Ny famoahana androany dia ny filazan'ny iOS 14 code ihany, ny iPhone 12 Pro hanana sensor toy izany.
Fantatra efa ela fa miasa i Apple hampiditra a To sensor (Fotoan'ny sidina) ho an'ny fakantsary aoriana. Ny zava-baovao anio dia ity sensor ity ihany koa dia hampidirina ao amin'ny iPhone 12 Pro manaraka.
Izany no niseho tao amin'ny Kaody iOS 14 efa tafaporitsaka andro vitsy lasa izay, ary ny tabataba toy izany dia nofohazin'ireo fiasa vaovao hita tao anatiny. Ao amin'ireto andalana fandaharana ireto dia nahita antsipirihany sasany momba ireo iPhones vaovao, manana anarana "d5x." Io dia raisina raha jerena fa ny ankehitriny dia misy soratra hoe "d4x".
Ny roa amin'ireo modely d5x ireo ihany no voatondro miaraka amin'ny sensor ToF namboarina, noho izany mora ny mieritreritra fa izy ireo no ho avy. iPhone 12 Pro sy iPhone 12 Pro Max.
Ity sensor ho Time of Flight ity dia tsy zava-baovao. Hanana projet infrared mitovy amin'ny an'ny fakan-tsary Front TrueDepth nitaingina iPhones amin'izao fotoana izao avy amin'ny iPhone X. Io dia ahafahan'ny iPhone mahazo dot matrix an'ny sary tsirairay miaraka amin'ny sandan'ny pixel tsirairay ao amin'ny toaster sensor ToF. Ity sanda ity dia ny halaviran'ny zavatra mankany amin'ny fakantsary.
Misaotra an'ity angona lavitra ity isaky ny sary, ny fakan-tsary eo aloha dia manana ny asan'ny FaceTime na maody fakana sary, ankoatra ny hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 12 » Ny kaody iOS 14 dia manondro fa ny iPhone 12 Pro ihany no hanana sensor 3D ToF
Alefaso tsara ny quarantine miaraka amin'i Alto's Odyssey sy Alto's Adventure, maimaimpoana ao amin'ny App store
Podcast 11x27: Akaiky ny iPhone 9 sy 9 Plus